Muurni PP "Marii Biyyoolessaa" Jedhus, Marichi Kan Hunda Hin Hammannedha
SQ Gurraandhala 10/2022]
Tibba kana muurni gabroomfataa Bilxiginnaa maqaa "Marii Biyyoolessaa" jedhuun burjaajii saba bal'aatti uumuu fi umrii bittaa sirna kanaa dheereffachuuf wayita ololan argaatti jirra.
Kanaan wal-qabatee, mariin jedhamee haasa'amu kun marii qaamni tokko (PP) qofti beekuu fi maltee ilmaan kaabaa ta'uu isaa rogeeyyiin siyaasaa Oromoo heedduun dubbachuutti jiru.
Haaluma kanaan, hogganaan Paartii KFO fi gameessi siyaasaa Prof. Mararaa Guddinaa turtii BBC News Afaan Oromoo waliin godhaniin akka himanitti, marichi waan gurguddaa lama of-keessaa qabaachuu akka qabu dubbatan.
1) Marichi hunda hammachuu (inclusive) ta'uutu irra jiraata. Amma garuu garee tokko (PP) qofaatu ofumaan of mari'achuuf deema;
2) Komiishiniin waan kana raaawwatu ammoo bilisa ta'ee hin ijaaramne. Kun silaa hojii mootummaati. Akka amma ilaallutti rakkoo biyya kanaa waan hiiku natti hin fakkaatu jechuun guutummaatti mormii qaban ibsatu Prof. Mararaan
Mootummaan PP akkuma filannoo bara 2021 qaama Oromoo bakka bu'u kamuu moggaatti dhiisee bira darbuun, kan sirna bittaa isaaf amanamoo ta'an qofa walitti qabuun, marii biyyoolessaa taasifneerra jechuuf akka deemullee namoonni heedduun ni dubbatu.
Gama biraatiin ammoo yeroo ammaa Oromiyaa keessatti tarsiimoo siyaasaa fi hawaasummaa guutummaatti dhuunfachuun Impaayera biyyattii irratti raafama ulfaataa geessisaa kan jiru WBO'n maricha irraa qooda kan hin fudhannee fi mariin Impeeriyaalistoota waliin godhamus akka hin jirre yeroo addaa addaatti himeera. Mariin kamuu hogganootaa fi qondaalota ABO-WBO ofitti hin hammanne ammoo fudhatama kan hin qabnee fi yeroo mara raawwatee kufaa ta'uun beekamaadha.
Uummanni Oromootis, ijaa fi qalbii isaa olola "Marii Biyyoolessaa" jedhu kamuu dhaga'uu akka hin qabnee fi shira achiin isatti deemaa jiru dursee hubachuu akka danda'uunis waan fardiidha.
IJA DUBBII: Ololli WBO Irratti Oofamu Haa Dhaabbatu!